Qaar ka mid ah Isimada Puntland oo Qado sharaf u Sameeyay Madaxweynaha Dawladda Soomaaliya – Puntland Voice
Qaar ka mid ah Isimada Puntland oo Qado sharaf u Sameeyay Madaxweynaha Dawladda Soomaaliya
January 9, 2018 12:24 pm Views: 19
Madaxwaynaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Madaxwaynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Madaxwaynaha dawladda DF ee soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Madaxwaynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo weliba Madaxwayne ku xigeenka Dawladda Puntland ayaa waxaa maanta 08 january qado sharaf u sameeyay islaan Ciise islaan Maxamed iyo suldaan Siciid Maxamed Garaase oo ka mid ah isimada gobolka Nugaal.
Qado sharafta ayaa waxaa kasoo qayb glay wasiiro, xildhibaano katirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Puntlnd.
Munaasabadaan qado sharafta ah ayaa waxay isimada gobolka Nugaal kusoo dhawaynayeen Madaxwaynaha dawladda Federaalka ee Soomaaliya iyo wefdigii ku wehelinayay safarkiisa uu ku joogo magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland.
Madaxwaynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxwaynaha dawladda federaalka ee soomaaliya ayaa uga mahad celiyay casumaada ay u sameeyeen isimada Puntland gaar ahaan isimada gobolka Nugaal .
Ugu danbayn Madaxwaynaha Dawladda federaalka ee soomaaliya oo labadii maalmood ee danbaysay ku sugnaa Puntland ayaa waxaa uu maalmahan soo socda sii joogi doonaa Puntland isaga oo safaro ku tagi doona qaar ka mid ah gobolada Puntland.